‘पार्टीकै सांसदलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आयो, अदालत सेटिङमा चल्यो’ -चित्रबहादुर के.सी. - Aayo Raibar
‘पार्टीकै सांसदलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आयो, अदालत सेटिङमा चल्यो’ -चित्रबहादुर के.सी.
in अन्तर्वार्ता, बहस, मुख्य समाचार
कुराकानीको शुरूआत अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिबाट नै गरियो । कुराकानीको क्रममा केसीले भने, ‘प्रतिगामीहरूले प्रतिनिधिसभा भंगलाई समर्थन गरेका छन्, नत्र त सामान्य प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक शासन मान्ने कसले यो कदमलाई समर्थन गर्छ !’
प्रस्तुत छ अनलाइनखबरले केसीसँग गरेको कुराकानी:
चिन्नै नसक्ने जन्तु त संसारमा मानिस न हो । महाकाली सन्धि पास गर्ने समयमा उनले कत्रा–कत्रा कुरा गरेका हुन्, त्यो कुरा अहिले सबैको कानमा गुन्जिरहेको छ । आज तपाईंलाई स्पष्ट रूपमा भनौं, २०६२/६३ को जनआन्दोलनताका हामीले चित्रलेखा यादवलाई सभामुख मानेर रत्नपार्कको सडकमा संसद चलाउँदा त्यहाँ मैले यो आन्दोलनमा पनि हिंड्ने, उता राजदरबारतिर ‘प्रभु म यतै छु, यता हिंड्न परेको हुनाले हिंडेको छु’ भन्ने मान्छे पनि हामीसँग छन् भनेको थिएँ ।
मैले सभामा यो कुरा भनिहालें, सभा सकिएपछि ओलीजीले आएर च्याप्प हात समात्नुभयो । ओलीले ‘म तपाईं सँगैसँगै छु, मलाई भनेको होइन तपाईंले’ भने । मैले ‘के तिम्रो नाम लिएर भनेको छु र यस्ता मान्छे पनि छन् भनेको हुँ’ भनें । त्यतिबेला सुवास नेम्वाङ र म वल्लो–पल्लो घरमा डेरा गरेर बस्ने गर्दथ्यौं । सुवासले रत्नपार्कमा ल मैले घर जाने ट्याक्सी बन्दोबस्त गरेको छु, त्यसैमा जाउँ भन्नुभयो । मलाई आश्चर्य लाग्यो, हामी सँगसँगै हिंडे पनि उहाँले कहिल्यै पनि त्यसो गर्नुहुँदैनथ्यो । के कारणले ट्याक्सीमा जाउँ भन्नुभयो भन्ने लाग्यो ।
उनकै चाहना हो नि ! उनी इमानदार भए त संसद विघटन गर्ने बेलामा पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने हो । म पनि ६० वर्षदेखि पार्टी संचालन गरेको व्यक्ति हुँ । संसद विघटन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा त पार्टीले मान्छ कि मान्दैन भनेर सोध्नुपर्छ । पार्टीलाई बाइपास नै गर्न पाइँदैन ।
ओलीजीको तमासा देखियो । आफू नजित्ने अवस्था भए पार्टीको बैठकमा नै नजाने, पार्टीभित्र लोभीपापीलाई पद दिने । वामदेवलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेका हुन् । संविधान च्यात्ने काम गरे । नेपाली जनताले त्यत्रो महत्वपूर्ण पदमा पुर्‍याएको राष्ट्रपति पनि खेलौना बनिन् । यो सबै सुनियोजित नै हो
हामीले कारबाही गरेको २४ घन्टा नबित्दै थापाको सांसद पद सर्वाेच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो । अदालतमा ओलीजीको कत्रो सेटिङ रहेछ देखियो ।
रोगले जहिले पनि कमजोर व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्छ । स्वस्थ मान्छेलाई रोगले छुन सक्दैन । त्यसैले २००७ सालअघिको, राजाको शासन, कांग्रेसको शासन हेर्नुस् । त्यसकारण हाम्रा कमि–कमजोरीमा उनीहरू खेल्ने र फाइदा उठाउने हो । हामी एकढिक्का भएको दिन उनीहरू पराजित भएका छन् ।
बाहिर विरोधीहरूले पद नछोडेको भनेका छन् तर वास्तवमा त्यो होइन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पार्टीको नेताले पार्टीको निर्णय र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर ओलीले यो सबै छले र अल्पमतमा पर्ने भएपछि पार्टीको बैठकमा नै गएनन् ।
गण्डकी प्रदेशमा देखिएको पार्टी विवादलाई मिलाउन के गृहकार्य भइरहेको छ ?
हामी २०५१ सालदेखि संसदीय प्रणालीमा आएका हौं । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म हामी निरन्तर संसदमा छौं । धेरै साथी सांसद हुनुभयो । केहीले पार्टी छोडेर जानुभयो । तर पार्टीमा रहेसम्म उहाँहरूले पार्टीको निर्देशनलाई शिरोपर गर्नुभएको छ ।
मन्त्री र अन्य धेरै लोभलालचहरू आए होलान्, पद र पैसाका अफर आए होलान् । अहिलेसम्म सबैले पार्टीको निर्देशन माने । कृष्ण थापाले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउने सवालमा मेरो विमति छ तर मैले पार्टीको निर्देशनलाई मान्छु भनी पटक–पटक भनेका हुन् । तरिका नै त्यही हो, पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ ।
केपी ओलीजीसँग मेरो जति व्यक्तिगत सम्पर्क र सम्बन्ध छ, हाम्रो पार्टीका अरू सांसदको छैन । थापा आफैंले ओलीको पुस ५ गतेको कदम प्रतिगामी हो र हटाउनुपर्छ भनेर वक्तव्यहरूमा आयो । पछि उनले पार्टीको ह्वीप र निर्णय पालन गरेनन् र मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने प्रस्तावमा सही गर्न मानेनन् ।
दलीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्वीप नमानेपछि त पार्टीले कार्बाही गर्छ । यो संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्त हो । हामीले कारबाही गरेको २४ घन्टा नबित्दै थापाको सांसद पद सर्वाेच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो । अदालतमा ओलीजीको कत्रो सेटिङ रहेछ देखियो । दलले आफ्नो सांसदलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएपछि दलीय व्यवस्था कसरी चल्छ ?
जसपाले पार्टीले निर्णय नमानेका कारण सरिता गिरीलाई तुरुन्त पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो । ओलीलाई पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले हटाइसकेपछि पनि उनी अहिले पार्टीको अध्यक्ष भन्दै हिंडेका छन् । त्यसकारण उनी आफैं अवैधानिक छन् । अदालत सेटिङमा गयो ।
एकदमै देखियो नि ! अदालतमा हजारौं मुद्दा होलान् तर हाम्रा सांसदको हकमा २४ घन्टामा फैसला आयो । पार्टीको ह्वीप नमानेको सांसदलाई यति छिट्टै पुनस्र्थापना गर्ने भनेको त सीधै सेटिङ हो नि ! त्यसभन्दा पहिला सर्वाेच्चले नेकपा एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै दल बनाउनुपर्छ भनेर फैसला दियो ।
एमाले एकतामा ‘शीर्ष नेतानै बाधक’